Gebi Ahaanba Goobaha Waxbarashadda Magaalada Los Angles Oo La Xidhay | #1Araweelo News Network
Gebi Ahaanba Goobaha Waxbarashadda Magaalada Los Angles Oo La Xidhay
Los Angles(ANN)Gebi ahaanba Goobaha waxbarashada ee Dugsiyada magaalada Los Angles ee dalkan Maraykanka, ayaa albaabada loo laabay maanta, kadib markii ay soo baxeen warar cabsi la xidhiidha cabsi xaga amaanka ah.
Warsaxafadeed ay soo sareen gudida waxbarashada ee degmeda Los Angles ayaa lagu sheegay in amarka xidhitaanka dugsiyadu uu saameyn doono in ka badan kun iskuul iyo kumanaan arday oo wax ka barta dugsiyadaa.
Bilayska ayaa sheegay inay heleen digniin xaga elektrooniga loo soo mariyey, taas oo ay sheegeen in aan la dheelsan karin, isla markaana ay lagama maarmaan tahay in la muujiyo taxadir.
900, oo Dugsiyada Waxbarashadda ah iyo 700, 000 Arday, ayay saamay arrinta xadhitaanka Iskuuladu, waxaana Boolisku baadhayaan digniinta ay heleen, taas oo la rumaysanyahay in laga soo diray dhinaca Caasimada Frankfurt ee dalka Germany.
Arrintan, ayaa kusoo beegantay laba todobaad kadib markii weerar ay ku dhinteen 14 qof uu ka dhacay San Bernardino.